COV ကျောင်းသားများ - မင်းတို့ပိုက်ဆံကုန်သွားပြီဆိုတော့အရက်မူးပြီးဘယ်လိုသောက်ရမလဲဆိုတာပါ - သတင်း
Cov ကျောင်းသားများ - မင်းတို့ပိုက်ဆံကုန်သွားပြီဆိုတော့အရက်မူးပြီးဘယ်လိုသောက်ရမလဲဆိုတာပါ
မင်းကမင်းရဲ့ overdraft ထဲကိုဒီလောက်ဝေးတဲ့အတွက်မင်းရဲ့အမေကအော်ဟစ်တာကိုငြီးငွေ့နေသလား၊ သင်သည်သင်၏ဟန်ချက်ညီမှုကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးပြီးသင့်အရက်ကိုသောက်ရန်အစားသင့်လျော်သောအစာကိုစားမည့်အစားထုပ်ပိုးထားသောခေါက်ဆွဲအရေအတွက်မည်မျှကိုတွက်ချက်ပါသလဲ။
သငျသညျအစဉျအမွဲထချိတ်ဆွဲနှင့်သင်နုတ်ထွက်£ 80 ဘယ်မှာသွားဘယ်မှာထွက်တွက်ဆရန်မထင်နိုင်သလား? စိတ်မပူပါနဲ့၊ မင်းရဲ့အရက်နတ်သမီးနတ်သမီးကိုမင်းကအနိမ့်ဆုံးကိုရအောင်ကူညီဖို့အတွက်ဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Coventry မှာဘတ်ဂျက်ကိုဘယ်လိုသောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေ၊ လှည့်ကွက်တွေနဲ့အချက်အလက်များ။
ပွဲအနိုင်ရဖို့အတွက်သင်၏ကစားကွင်းကိုသိရလိမ့်မယ်။ ကျောင်းသားတိုင်း၏ 'Holy Grail' အရက်ဆိုင်သည်သင်နေထိုင်ရာနှင့်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားသည်။ ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့၊ ဈေးချိုတဲ့တစ်နေရာရာ၊
ထင်ရှားသောရွေးချယ်မှုသို့သွားမည့်အစားအလွန်စျေးကြီးသော Gosford Sains ဟုခေါ်သည့်ထိုညံ့ဖျင်းသော၊ Coventry ထောင့်ဆိုင်များသည်သင့်ကိုတကယ်အံ့အားသင့်စေသည်။
Spar (သို့) Brambles တို့လိုစူပါမားကက်သေးသေးလေးတွေဟာစျေးသက်သက်သာသာနဲ့အရက်အချို့ကိုရှာတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်အလွန်ကြီးစွာသောကြွေးကြော်သံဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်စူပါမားကတ်သည်နာမည်တူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းအကြောင်းအရာများမှာကွဲပြားနိုင်သည်။ မြို့ထဲမှာ Big Sains အနီးမှာဆိုရင်မင်းမှာရွေးချယ်စရာတွေပိုများလာလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့စျေးနှုန်းလည်းနိမ့်ကျလိမ့်မယ်။
စုစုပေါင်းအရက် combos သင့်ပိုက်ဆံကယ်တင်လိမ့်မည်
စကားလုံးသုံးလုံး။ ရမ်နှင့်ရေ။ စောင့်ပါ၊ သင့်ဖုန်းကိုပြတင်းပေါက်မှမလွှင့်ပါနှင့်။ သင်ရွေးချယ်သောရမ်သို့မဟုတ်ဗော့ဒ်ကာအချို့ကိုယူပြီး၎င်းကိုရေခဲရေအနည်းငယ်နှင့်ရောစပ်ပါ။ ဒါဟာအရသာကအကြွင်းမဲ့အာဏာ shite ကဲ့သို့မြည်းမပါဘူးရှိရာအမှတ်အထိရေ။ ဒါ့အပြင်ရေအခမဲ့ဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်စျေးပေါ (ကြိုဆိုပါတယ်) ။
နောက်အဆင့်တစ်ခုကတော့မင်းရဲ့အရက်ကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရောရောပြီးရောရောထွေးပါစေ။ ၎င်းသည်ကာဗွန်နိတ်အချိုရည်များကသင့်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာမူးယစ်စေနိုင်သည်ဟူသောသိပ္ပံနည်းကျအချက်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကာဗွန်နိတ်သည်အစာအိမ်တွင်ဖိအားကိုတိုးစေသည်၊ ဒါကြောင့်လာမယ့်အချိန်သင့်ရဲ့ရောနှောအဖြစ်တောက်ပရေကိုအသုံးပြု။ ကြိုးစားပါနှင့်သင်၏နောက် JJ ရဲ့စန်းအင်္ဂါနေ့ entry ကိုအခကြေးငွေဆီသို့စုဆောင်းငွေကိုသွင်းထား။ သတိရပါ: fizzier သငျသညျ fuzzier ရရှိသွားတဲ့!
သင်မည်မျှဖြုန်းနေသည်ကိုဂရုစိုက်လျှင်အနည်းဆုံး။ ပေါင် ၉ ပုလင်းသေးငယ်တဲ့ပုလင်းတစ်လုံး ၀ ယ်မယ့်အစားကြိုတင်မှာမပြီးသေးပါဘူး။ ပိုကြီးတဲ့ဗော့ဒ်ကာတစ်ပုလင်းတစ်ဝက်ကို£ ၅ ပေါင် ၆ ပေါင်ပေးပြီးကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်နိုင်ပါတယ်၊ သင်ဟာဥရောပသားမဟုတ်လျှင်ညလုံးသင့်အတွက်လုပ်သင့်သည်။ သငျသညျတကယ့်ပေါ့ပါးမဟုတ်လျှင်ငါပျမ်းမျှဝိညာဉ်အရွယ်အစားအတွက် halvsies ထက်ပို။ သွားဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
Quids Inn သည်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သည်
သငျသညျအစဉျအမွဲနှောင်းပိုင်းတွင်အပြေးသည်နှင့်အမှန်တကယ် pres များအတွက်အချိန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, သို့မဟုတ်သင်သင်၏ living ည့်ခန်းထက်အခြားတစ်နေရာရာ pres ရှိသည်ဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်, Quids အင်းသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအလောင်းအစား။ Cov ရှိအရက်ဆိုင်အားလုံးတွင် Quids သည်စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သည်။ £ ၁ ၀ိမင်းကနှစ်ဆဗော့ဒ်ကာကပ်ကိုပေါင် ၂.၇၀ နဲ့ရနိုင်တယ်။ ဒါက Kasbah မှဝင်ပေါက်ထက်လျော့နည်းပါတယ်။
Quids ၏ ၀ န်းကျင်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသင်အားဖြုန်းတီးသည်ဟုခံစားရပါကသူတို့ပတ်လည်အသံစနစ်တွင်သူတို့ကစားမည့်နောက်တစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် Quids သည်သင်၏လက်ဖက်ရည်ခွက်မဟုတ်လျှင်သင်၏ရွေးချယ်သောဘားတွင်သစ္စာရှိကတ်ပြားနှင့်အထူးကျောင်းသားအထူးလျှော့စျေးများရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ The Castle Grounds ကဲ့သို့သော Cov အရက်ဆိုင်များတွင်ကျောင်းသားများ၏ကတ်ပြားများရှိသည်။ တိုင်းပေါင်ရေတွက်!
ထိုအခါသဘာဝကျကျပြုမူခြင်းနှင့်သင်ညဥ့်အဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်အဆိပ်အတွက်မှောင်ခိုင့်သောအချက်ကိုမသိဘဲ, Kasbah မှသင့်အားပေါ့ပေါ့တန်တန် bouncers ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံမရှိ? ပြproblemနာမရှိပါ၊ သင့်အင်္ကျီအိတ်ကပ်ကိုမင်းဖုံးထားပြီ
K သည် Rush ကိုအကောင်းဆုံး option ကိုကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်
ခေတ္တခဏသာသင်ချစ်ပ်များ၊ ဘာဂါများ၊ တစ်ခုမှာသင်သည် carbs သည်သင်၏အရက်ကိုစုပ်ယူလေ့ရှိသောကြောင့်သင်မသောက်မီ carbs နှင့်မပြည့်စုံချင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အရက်မူးရန်အရက်ပိုလိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်မစားရဟုမပြောသော်လည်းသင်မသောက်မီ ၅ နာရီအထိသင်ဘာစားသည်ကိုစဉ်းစားပါ။
အလားတူပင်သင်သည် JJ ၏အိမ်သာ၌သင်၏ညစာထွက် puking စတင်အဖြစ်, သင်စားသောအရာကိုလည်းသင်၏ညဥ့်ပိုမိုမြန်ဆန်ဆုံးကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ အစာမစားမီကြော်ထားသောအစားအစာများကိုမစားရန်ကြိုးစားပါ။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အစာအိမ်ကိုအက်ဆစ်ဓာတ်ပိုမိုစေသည့်အတွက်ကြောင့်သင်ဖြိုချလိုက်သောဗော့ဒ်ကာကိုကာနှင့်လောင်ကျွမ်းသောအခါအက်ဆစ်ဓာတ်ပါ ၀ င်မှုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
sneaky sneaky x
ကျိုးပဲ့သောကျောင်းသားများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အရက်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမြဲသေချာအောင်လုပ်ပါ၊ သို့မှသာသင်သွားလိုသည့်နေရာကိုသွားနိုင်သကဲ့သို့သောက်နိုင်သည်။ တန်းစီအတွက်တက် Sobering shit မသာပေမယ့်လည်းလုံးဝငွေဖြုန်းတီးသည်။
လူတွေပိုက်ဆံဖြုန်းတီးတာတစ်ခုကသူတို့သောက်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့သောစိတ်ဓာတ်များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်အချို့သည်ပိုမိုအရသာရှိသော်လည်းမည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမဆိုဗော့ဒ်ကာအရသာမကောင်းကြောင်းလူတိုင်းသိကြသည်။
ပျော်စရာအဖြစ်မှန်: Asda နှင့် Smirnoff ဗော့ဒ်ကာကိုစက်ရုံတစ်ခုတည်းတွင်ပင်လုပ်သည်ဟုစွပ်စွဲကြသော်လည်း Smirnoff သည်စင်ပေါ်တွင်အဈေးအသက်သာဆုံးသောသောက်စရာမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သူတို့သည်သင့်ကိုပေးနေတာပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ Glenn ရဲ့ဗော့ဒ်သို့မဟုတ် Absolut ရှိမရှိစိတ်မပူပါနဲ့။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်အကြံဥာဏ်ကိုယူ၊